Momba anay - SANXIA
Orinasa lehibe eo amin'ny indostrian'ny entam-barotra enamel an'ny hazavana any Shina.
Iray amin'ireo toby famolahana lakozia lehibe indrindra any Azia.
Ny orinasam-pamokarana lehibe indrindra amin'ny lakozia fandrahoana vy eto amin'izao tontolo izao.
Maherin'ny 2000 metatra toradroa ny foibem-panandramana fanandramana nohamarinin'ny CNAS.
SANXIA dia niorina tamin'ny 1998
dia orinasa mpanamboatra matihanina mampiditra mahaleo tena R & D, famolavolana indostrialy, famokarana bobongolo, famokarana vokatra, fifehezana kalitao ary marketing amin'ny lakozia. Izy io no manana trano fanatobiana vy lovia ambony indrindra eto an-tany ary izy koa no orinasa mpamokatra lehibe indrindra eto an-tany.
Nandritra ny fotoana lava, SANXIA dia manome vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ny tetik'asa OEM an-jatony mpanjifa malaza eran'izao tontolo izao. Lasitra an'aliny no nanatri-maso ny fizotry ny fiaraha-miasa eo amintsika sy ny marika manerantany. Ny vokatra dia amidy amina firenena mihoatra ny 30, toa an'i Etazonia, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, South Africa, sns. Ary ny volan'ny fanondranana no voalohany indrindra tamin'ny indostrian'ny fitaovana fandrahoana vy ao Azia.
Ny vokatra SANXIA dia feno amin'ny sokajy, ao anatin'izany ny lakozia vy, ny enamel, ny lakozia vy, ny karazana vy vaovao, kojakoja vita amin'ny lakozia, kojakoja vita amin'ny vy tsy misy fangarony, sns. ary kojakoja fandrahoana hafa. Ny vokatra rehetra dia nandalo ny fanamarinana matihanina an'ny FDA sy ny Vondrona Eropeana LFGB, ary mankafy laza malaza sy laza eo amin'ny tsena manerantany.
SANXIA dia mifantoka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana teknolojia vokatra ary famolavolana vaovao, miaraka amin'ny ekipa 130 R&D ary mpiasa teknika an'arivony. Nandritra ny taona maro, nianatra tsy tapaka ny traikefa an'izao tontolo izao izy, nanolotra fitaovana matihanina mitarika an'izao tontolo izao, teknolojia avo lenta, fanatsarana automatique ary haavon'ny famokarana manan-tsaina, ary manana tsipika fandefasana solosaina mandeha ho azy feno otrikaina, tsipika famokarana vokatra menaka legioma isan-karazany ary famokarana matihanina hafa. ary fitaovana fanandramana.
Ny tsipika famokarana SANXIA dia mamorona efitrano fanaraha-maso vy mahira-tsaina manoloana ny lafaoro hifehezana ny kalitaon'ny akora amin'ny fotoana tena izy, hiantohana ny kalitao sy ny fitoniana amin'ny fizotran'ny fanariana, ary hahatratra ny fivoahan'ny fako mivaingana amin'ny alàlan'ny fako mivaingana. rafitra fitsaboana, izay fahombiazana revolisionera amin'ny indostrian'ny casting.
Amin'ny maha-orinasa mitarika amin'ny indostrian'ny vy dia manana 6 ny tsipika fanariana DISA mandeha ho azy indrindra isika, mahatratra hatrany amin'ny 98% ny haavon'ny automation. Ny fahombiazany azo antoka sy azo antoka dia antoka matanjaka amin'ny famokarana vokatra avo lenta.
Ny fikosoham-bary tsara SANXIA dia mampifangaro ny automation sy ny tanana, ny fandefasana ny fenitra fitsapana isan-karazany am-polony, ataovy matanjaka kokoa ny fametahana ny fonon'ny vilany, hahazoana antoka fa ho matanjaka sy tsara tarehy ilay vokatra.
SANXIA dia mampifanaraka fitaovam-piadiana mahery vaika manohitra ny harafesina manohitra ny harafesina, manadihady ny haitao maranitra farany ambony, ary miara-miasa amin'ny orinasa eo an-toerana mba hamolavola tsipika famokarana hafanana nitrida. ny vokatra dia manana endri-javatra fanoherana ny harafesina sy fanoherana ny okididia amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana alohan'ny famafazana sy famenoana ny banga ho an'ny teknolojia anti-harafesin'ny indostrian'ny vy.
Andalana famokarana solika matihanina miaraka amina fomba fanamboarana azo antoka tanteraka, aza mifanerasera amin'ny simika manimba, ny menaka legioma dia nampiana ho fiarovana manokana.Raha ny traikefa sy fanatsarana an-taonany maro, SANXIA dia mamorona teknolojia "Super Oil Finished" manokana, miaraka amin'ny samy hafa. ny loko sy ny vokatra avy amin'ny menaka dia manampy ny sivilizansa indostrialy hiverina amin'ny hatsaran'ny natiora.
Tongasoa eto amin'ny fiaraha-miasa
Amin'ny ho avy, ny SANXIA dia hanohy hanaraka ny fotoana, hikatsaka fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fanavaozana ny vokatra.
ncoated Cast Iron Skillet, namel Skillet, xtreme Iron Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, Cast Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet,